Vakawanda vashandisi vehutachiona vane hurema vanoona mawebsite akaoma kana kuti asingakwanisi kushandiswa nekuda kwenzira yavakagadzirirwa.
Iyi webhusaiti yakagadzirirwa kuva inopfurikidza sezvinobvira uye kuti ienderane nemhando dzehutachiyanzvi hwekugadzirisa hunoshandiswa nevanhu vane hurema, kusanganisira vaverengi vekrini.
Sezvo zvakadaro, vashanyi vanogona kutarisa ukuru hwemashoko, mavara, mavara emashiripiti uye kunyange kushandisa 'access keys' pabhobhoyo panzvimbo pemushonga kuti uende kuburikidza nemapeji.
Kufamba iyi webhusaiti
Kuti uende kuburikidza newebsite ino, tapota shandisa menyu iri pamusoro peji. Kana iwe uri kushandisa muverengi wekrini, unogona kushandisa inopindiro yakakwirira alt - M (press enter), izvi zvichakutora iwe kumutambo mukuru, kubva kwaunogona kushandisa kiyi tab kuti uende kuburikidza nehutano.
Iwe unogona kuchinja usayizi hwemafonti emagwaro aya kune zvaunofarira kuburikidza neshanduro yako. MuInternet Explorer, sarudza Tarisa, ipapo Gwaro Rakawandisa, uye ipapo sarudzo yako yakasarudzwa.
Iwe unogona kutumira yako micheti yepepaiti mune ino webhusaiti. Muchi Explorer sarudza Zvishandiso, ipapo maIndaneti, uye pane 'General' tab, sarudza Kugona. Dzokorora pane chero ipi zvayo kana zvitatu zvekutarisa mavara kuti usatarise mavara, mitambo yepafaira kana mapepa epafaira. Muhwindo rimwe chete iwe unogona kuchinja yako stylesheet kuburikidza nebhokisi rinoti, 'shandura dhidhiyo uchishandisa stylesheet yangu' uye tangotarisa pane yako stylesheet uye chofoza ok.
Takaedza iyi webhutaneti zvakakwana asi tinogara tichishuva kuvandudza coding yedu uye tinoda kuziva kana wakawana rugwaro urwu ruwanika kana kana wakambove nematambudziko.